Ukuzibophelela njengesibini: indlela yokoyisa-Iingcebiso zaMadoda anesitayile | Amadoda aQinisekileyo
UAlicia tomero | | Ukunyamekela, Isibini kunye nokwabelana ngesondo
La ngamaxesha anzima kakhulu achaphazela izigidi zabantu emhlabeni kwaye bevalelwe njengesibini. Iya kuba ngumceli mngeni omkhulu wokusinda, Ukuthatha into engazange inyanzeliswe kubantu abaninzi. Kufuneka sigcine isinamathiselo kwigumbi elinye, ixesha elide, kwaye oko ikakhulu kubandakanya ukugcina imbeko.
Ukudityaniswa kwesibini kufanelekile yenye yeedolophu ezinkulu Singalawula njengowona mceli-mngeni kuphela kwaye mkhulu ebomini bethu. Iya kuba yinto kwaye ikhetheke kwaye kungcono ngoku kunakuqala Kuya kufuneka sisekele ukutshixa kwaye silawule ubomi bethu njengesibini. Apha sicebisa amanye amanyathelo anokukunceda.
Indlela yokoyisa ukuvalelwa njengesibini
Asinakufikelela kwixabiso izakuzisa ntoni ukuze ivalelwe ixesha elide ude ubone kwa lo mntu imini yonke. Kunzima ukuyigcina le meko, ayinakuthetheleleka ukuba akunakubakho ungquzulwano lincinci okanye kwezona zibini zizinzileyo. Kungenzeka ukuba ibhalansi ayizukuhlengahlengiswa ngokufanelekileyo kwaye Iintlantsi ziyabhabha kuwo nawuphi na umbandela. Ukuzingca nentlonipho zizinto ezimbini ezivaleleke ngokulinganayo emzimbeni wethu kwaye kufuneka silinganise ngokuphucula izimvo zethu.
Kuya kufuneka uthathwe yimeko: inyani yokuba kufuneka simamele rhoqo iindaba ezimbi isenza kuxhomekeke kwisifo esiqaqambayo ngokubanzi. Ezi ntlobo zeziphumo kufuneka zithathelwe ingqalelo kuqala, kuba xa kukho ukungqubana okuncinci nomnye umntu, kunokuvela impikiswano. Ke ngoko vumela ukuba uthathwe yimeko kwaye wamkele okwenzekayo, ayikho enye indlela enokubakho yokuphuma.
Kuya kufuneka ugcine inkqubo yesiqhelo: Kufuneka sijongane nale meko ngaphandle komzamo ongaphezulu, ngumsebenzi onganyanzelwanga kwintando yethu, kananjalo akufuneki ukuba wenze izinto obungakhange uzenze kunye. Kubalulekile fumana isiqhelo sayo yonke loo mizuzu eningabelani kunye ngayo, xa ningekho ekhaya.
Ukugcina indawo yangasese kubalulekile: sonke sidinga indawo yethu. Kule nto awunyanzelekanga ukuba uhlengahlengise okanye utyale ukuzingca loo mntu anokwabelana ngako konke kunye nawe, kodwa ke zama ukumisela indlela obaleka ngayo. Kuneke u zama ukufumana indawo yakho kwaye uyinikele kwinkathalelo yakho, ufunda incwadi okanye nantoni na ekwenza uzive wonwabile.
Yiba nendawo yabanye abantu: nangona sisazi ukuba asinakuyenza ngokwasemzimbeni, Akunyanzelekanga ukuba siyeke ukugcina sinxibelelana nabanye abantu. Kufuneka sigcine ubudlelwane obusebenzayo kunye nabanye abantu, ekugqibeleni yimeko egqithileyo ingasenzi sizive sedwa.
Ixesha lokucinga neqabane lakho: ngoku kukho ixesha elininzi lokuthetha, ukwabelana ngemvakalelo kunye neenkxalabo. Soyisiwe yimeko kunye noxinzelelo lwengqondo kwaye Kuya kufuneka uyazi indlela yokwabelana ngezo mvakalelo ngaphandle kwenjongo yokonzakalisa nabani na.
Kufuneka uvule iimvakalelo zakho: mhlawumbi lixesha lokuba uzivumele ukuba uthathwe ziimvakalelo zakho kwaye ubonise yonke into eniyithandayo. Cwangcisa le meko njengomzuzu okhethekileyo Zama ukufumanisa konke okulungileyo nokuqinisekileyo okukhoyo ngomnye umntu, nangona kufanelekile ukuzama ukufumanisa ukungakhathaleli kunye nokubandezeleka okuncinci, kodwa ngengxoxo elungileyo evulekileyo kwaye ngenjongo yokwamkela.
La ayingawo amaxesha okukhupha iimpahla ezimdaka okanye ukulungisa ityala: abantu abaninzi basebenzisa le meko yokungakhululeki kwaye bakwazi ukuyilwa Baphethukela kothandekayo wabo ukulungisa umba osalindelwe. Le yinto ekufuneka siyicinge kwaye siyenze ngaphakathi ngokuzimela.
Yenza konke okusemandleni akho ukuzisa yonke into kwisiphelo esifanelekileyo. Ngolu hlobo lwenkcazo siqhubeka ukufaka intlonipho kwiqabane lethu. Akufuneki uzame ukusoloko ucinga ngo "ucinga" kodwa ngo "Ndicinga" kwaye "ndiziva", zama ukubeka iingcinga zakho kubuntu bakho, kodwa ngezimvo ezingathathi cala kwaye hayi kwaphela ukuzingca. Sukuziva ulixhoba okanye umenze omnye umntu abenetyala ngayo yonke into, ngokulula beka iimvakalelo zakho kwaye umazise yonke into ngovelwano. Omnye umntu kufuneka ayazi indlela yokumamela nokwamkela.
Khangela ixesha lokuzonwabisa. Kukho iimilo ezingenasiphelo kunye nemibala xa kusiziwa ekucingeni amaxesha amnandi. Ukukhululwa kwee-endorphins kunye ngamaxesha okubaleka kunye nokuhleka kuyanceda ukujongana nale meko ngcono. Kukho amathuba angenasiphelo, njengokukwazi ukubukela imovie okanye uthotho oluthandayo, imidlalo yevidiyo, imidlalo yebhodi, ukwenza uhlobo oluthile lomdlalo we-aerobic, ukudanisa kunye nokucula ikaraoke.
Mhlawumbi la ngamaxesha afanelekileyo okufunda ukukhula kunye neqabane lakho. Bangamaxesha okucinga kwaye balungile ekuyileni izicwangciso zekamva kwaye zitshintsha izimvo zakho ngeyona ndlela ifanelekileyo. Ukuba uneeprojekthi ezilungileyo engqondweni kunye namathuba okuba usuku olunye utshintshe into ibe ngcono, Kungoku xa ungathatha ithuba lokwenza ezo zicwangciso kunye.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » Ukunyamekela » Ukuzibophelela njengesibini: ungoyisa njani